Indlela Yokufunda Ukukhuluma NgesiNgisi?
Lokhu cishe umbuzo obunzima kakhulu kubafundi belimi. Yebo, kubalulekile ukufunda, ukukhuluma, ukufunda, ukubhala, noma ukuhumusha imibhalo ... Ungakwenza kanjani lokhu? Kungcono kulabo abanobuhle bokusebenza okuthile, uma izinga lwazi seluvumela ukuba uzame, zama ukuxhumana nezikhulumi zomdabu, futhi uma kungenjalo, khona-ke inkinga ivela: "Uqala kanjani?" Ngisho nokukwazi nokuqonda uhlelo lolimi ku-5 plus , Ngezinye izikhathi kunzima ukukhipha okungenani izwi, besaba ukuthi ngeke kuqondwe yi-interlocutor, futhi ekugcineni kuvela. Siqala ngenjabulo ukukhuluma amagama aseRussia - amaNgisi, asiqondi, futhi sithukuthele ... Ingabe lesi simo sijwayele? Ngisho nakakhulu kulabo abasanda kuqala ukufunda ulimi, noma bahlela ukuqala ukwenza lokho. Ungakwazi ukulahleka enombolweni enkulu yezifundo kanye nama-curricula anikeziwe, awukwazi ngempela ukuthi ungathatha ...
Impendulo, njengoba njalo, ilula: ukufunda ukukhuluma, udinga ukukhuluma. Khuluma izinkulumo, zakha wena ngokwakho. Cabanga ngokuthi ungasho kanjani, nokuthi ungayisho kanjani.
Ngokuqondene nomkhuba wokwakha imishwana, esiteji sokuqala ngeke kube lula ukuxhumana nomuntu othile, okungenani ngoba akekho onokubekezela ukulinda uze uzame ngokuzama ukwenza umcabango, eqinisweni, engazi ukuthi ungayenza kanjani.
Umkhawulo othile udinga ukunqotshwa ngokwawo ngokuzimela, okungukuthi, ukuqonda izisekelo zezakhiwo zolimi, ukuqonda izimiso zokwakha imishwana futhi, okubaluleke kakhulu, ukuqonda nokukhumbula ukuthi lezi zakhiwo kufanele zisetshenziswe nini nokuthi zingasetshenziswa kanjani. Eqinisweni, ukuze ufunde lokhu, udinga ukusho inqwaba noma amakhulu emisho nemishwana ye "isifanekiso" ngasinye, futhi udinga ukukwenza ngokuhlakanipha. Kunzima kakhulu ukukhetha inkambo yokuqeqeshwa, okuyiyo, phakathi kwakho konke okunye, okuyoba nomkhuba onjalo. Ngempela, kufanele ube nethuba lokuzihlola, futhi futhi, inkulumo ngayinye akufanele ibonwe kuphela, kodwa nayo izwile, njll. Lezifundo kufanele zizwakala, izifanekiso kanye nemishwana kufanele ikhethwe ngokusho okuyinkimbinkimbi ekhulayo, ngezihloko ezithile.
Indlela eyithakazelisayo inikezwa yiKhrofetho yamaNgisi weNgisi, okuhunyushwa ngokuthi "isiNgisi ngezifanekiso". Lezi zigaba zihlukaniswe ngamazinga angu-8, izinga ngalinye liqukethe izifundo eziyi-15 zokuxhumana, ngasinye esamenyezelwayo, futhi kuzo zonke izifanekiso zizinikezwa esihlokweni esinikeziwe, bese unikezwa ithuba lokwakha imisho ngokwakho (ngokuvumelana nemigomo efanayo), futhi ngokushesha uzame . Isifundo ngasinye singabanjwa ngokuphindaphindiwe. Futhi ujabulela amathuba okuqeqesha umbono wezindlebe ngezindlebe. Kuphazamisa kuphela ukuntuleka kwezincazelo zezifanekiso ngaphakathi kwekharikhthi ngokwalo, nakuba zisendaweni esemthethweni http: / www.englishpatterns.ru /, futhi zingalandwa mahhala ngesimo semiboniso ye-MS Power Point.
Kuyathakazelisa ukuthi le nkambo ikunika ukuthi udlule kuwo wonke amazinga kusuka ku-"zero" kuya "ophakathi okuphezulu" onolwazi oluncane (okungukuthi amagama angu-800), owamenywa ukuba ufunde wena noma izinhlelo zokuqeqesha ezikhethekile ongasithola Esizeni. Awekho amanye amagama asetshenziselwa ikharityhulam; Ugxila kuphela ekuwakheni imishwana, futhi akukho lutho kunoma yini. Kuyinto elula ngempela. Izinga elithi "vyshesrednego" ngesikhathi esifanayo lisho ulwazi lwezinhlaka zolimi kanye nokukwazi ukuzisebenzisa, isb. Ukuze uthole ushintsho olwengeziwe lwangempela kule nqanaba, ngemuva kokuqedela inkambo, udinga kuphela ukugcwalisa nokwandisa isilulumagama sakho, ukufunda izincwadi, ukubukela amabhayisikobho nokuxhumana nabantu, ngamanye amazwi, ukukwenza.
Ngokuqondene nomkhuba oqhubekayo, enye yezinsiza ezithakazelisayo kunazo zonke namuhla iwebhusayithi http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ - iwebhusayithi esemthethweni ye-BBC, lapho ungakwazi khona ukwandisa nokuthuthukisa amakhono akho olimi.
Kunezingosi eziningi ze-intanethi lapho ungazijwayela khona ukuxhumana kwangempela nabantu.
I-Skype iyihlelo elihle kakhulu yokukhulumisana kwe-intanethi. Uhlelo lungasetshenziswa mahhala kusuka kuwebhusayithi esemthethweni.
Yebo, into ebaluleke kakhulu kunoma yiliphi ibhizinisi isifiso nenhloso. Ungakhohlwa ngakho!
Cubar - ingabe kunjalo?
Izindlela ezingu-6 zokuthi "hello" ngesiShayina bese uya endaweni
I-Phraseology "ihlambalaza ngesibhamu": incazelo nencazelo
Indlela ukupheka amazambane okumnandi?
Audit Environmental - isidingo ezinzima ukulawula Imininingwane
Iyini i-White Tea Yokunambitha Nombala?
UNelson Mandela: A Biography, izithombe, ucaphuna, kuka waziwa. UNelson Mandela - umongameli wokuqala onsundu eNingizimu Afrika
Tu-214 - i airliner wokuqala Russian to-date nezidingo zomhlaba wonke
Ukupheka pancake ku Ryazhenka
Unozinti Voytseh Kovalevski
Yikuphi okungcono ukuthenga DVR? Impendulo evela kumakhasimende kanye nochwepheshe ku DVRs
-Notebook Samsung N150 Plus: ezibekiweko lobuchwepheshe, izincazelo kanye nokubuyekezwa of abanikazi
Trapezoid kukanxande futhi izakhiwo zalo